Ungaba kanjani yi-meteorologist: okufanele ufunde futhi kuphi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ungaba kanjani yisimo sezulu
Uma ufunda le bhulogi kaningi, ungahle uyithande imeteorology. Uma ufuna ukuguqula ukuzilibazisa kwakho kube ngumsebenzi wakho, kufanele wazi yonke imihlahlandlela yokufunda ungaba kanjani yisimo sezulu. Lapha eSpain kunezinto ezahlukahlukene nezifundo ezingaholela ekutheni ube yisazi sezulu esihle. Okokuqala kufanele wazi ukuthi kufanele ufunde kuphi nokuthi uzohola malini.
Ngakho-ke, kule ndatshana sizokutshela ukuthi ungaba kanjani yi-meteorologist lapha eSpain.
1 Uyini isazi sezulu futhi wenzani?
2 Ungaba kanjani yiMeteorologist: okufanele ufunde
3 Ungaba kanjani yisimo sezulu: uzofunda kuphi
4 Usebenza kuphi futhi uhola malini?
Uyini isazi sezulu futhi wenzani?
Isithombe se-meteorologist yisona esidala esisibona ku-TV lapho sithola isimo sezulu. Kodwa-ke, isazi sesimo sezulu ngusosayensi ogxile kakhulu ekutadisheni umkhathi futhi ongasebenzisa imigomo yesayensi ukuze akwazi ukubona, ukuqonda nokuchaza ukuthi umkhathi usebenza kanjani nokuthi uwuthinta kanjani uMhlaba. Ngenxa yolwazi lwakhe akakwazi nje kuphela ukuchaza ukuthi umkhathi uthinta kanjani iplanethi yethu, kepha futhi ingabikezela nokuziphatha kwabo.
Ngakho konke lokhu, isazi sesimo sezulu sikulungele ukuqonda nokubikezela isimo sezulu. Abezimo zezulu ababambelela kuthelevishini bangabambalwa kuphela babo bonke abezimo zezulu ngaphandle lapho. Kuneminye imisebenzi eminingi eyenziwa yilaba bachwepheshe. Ezinye zazo yilezi ezilandelayo: balindela izimo zezulu ezingezinhle njengezimvula ezinamandla, izivunguvungu, iziphepho, njll. Yazi umphumela wemisebe ye-ultraviolet ezintweni eziphilayo, yazi ukusebenza kongqimba lwe-ozone, phakathi kokunye. Kufanele ukwazi konke lokhu ukuze bakwazi ukwazisa izinhlangano zomphakathi futhi bathathe izinyathelo ezidingekayo.
Uma ufuna ukufunda ukuthi ungaba kanjani yi-meteorologist kubalulekile ukuthi ube nekhono elihle kwi-mathematics ne-physics. Futhi ngukuthi ngesikhathi kufundwa lo mkhakha wokuba yisazi sezulu kumele ubhekane nezinqubo zokuhlaziywa kwedatha nokuchazwa kwazo. Kunokukhethekile okuningana uma kukhulunywa ngokufunda ukuthi ungaba kanjani yi-meteorologist. Lezi zindawo zesimo sezulu zimi kanje:
Izimo zezulu zezulu: Umsebenzi oyinhloko ukwazi nokusesha idatha esebenza njengamaphethini ukusiza ukuqonda ngokugcwele nokuqonda isimo sezulu sendawo.
Izazi zezulu ezisemkhathini: funda ngokuhamba komoya womhlaba kanye nemiphumela engaba khona emvelweni. Inokubandakanyeka kwayo emikhakheni yokukhiqiza efana nezolimo nemfuyo.
Isimo sezulu sokusebenza: yiyona efunda umoya, ukushisa, umswakama nengcindezi yomoya. Zonke izinto eziguquguqukayo zesimo sezulu zifundiswa kabanzi yilaba Meteorologists.
Izimo zezulu ezibhekelekayo: umsebenzi wakhe ukusebenza ezinkampanini zomshuwalense ukuthola izimangalo ezingaba khona. Ukuze wenze lokhu, kufanele uphenye kahle isimo sezulu sangesikhathi esedlule ukuze usethule enkantolo yezomthetho lapho kudingeka.
Ukusakaza abezimo zezulu: nguyena osebenza ngokuhumusha nokukhumbula izimo zezulu zomsakazo nethelevishini. Kuyinto yakudala.
Isimo sezulu se-Synaptic.
Isimo sezulu sezulu, ezolimo kanye nolwandle: igxile kule misebenzi.
Abacwaningi besimo sezulu: Yilabo abasebenza kuma-ejensi kahulumeni, ezempi noma emkhakheni kazwelonke wezulu.
Gcina izazi zezulu
Ukufundisa izazi zezulu: yilabo abanikeza ulwazi emisebenzini yaseyunivesithi.
Ungaba kanjani yiMeteorologist: okufanele ufunde
Umbuzo osemqoka ekufundeni ukuthi ungaba kanjani yi-meteorologist ukuthi kufanele ufunde. Okokuqala, yazi ukuthi kunezigaba ezimbili ezibekwe yiWorld Meteorological Organisation. Lezi zigaba ezimbili zimi kanje:
Izazi zezulu: kudingeka ukuthi babe neziqu zasekolishi futhi bakwazi ukuqedela iphakethe lokufundisa eliyisisekelo.
Ochwepheshe bezimo zezulu: Yilesi sigaba esingadingi iziqu zaseyunivesithi kepha singaba nenketho yokusebenza kulo mkhakha. Ungaba umlindi wesimo sezulu, inqobo nje uma ungaqedela iphakethe lokufundisa eliyisisekelo.
ESpain asikho iziqu zaseyunivesithi zokufunda ngemeteorology. Ngakho-ke, kufanele ube nomunye wale misebenzi:
Isiqu kusayensi yezemvelo
Uma usuqedile iziqu, kufanele uthathe iziqu ze-master ku-meteorology noma i-climatology enikezwa amanyuvesi ahlukile eSpain. Uma ufuna ukusebenza njenge-meteorologist yombuso kuyadingeka ukuthi i-super ukuhlolwa okuncintisanayo kwe-AEMET. Ngokuya ngamazinga amancane ezifundo, ungakhetha indawo eyodwa noma enye.
Ungaba kanjani yisimo sezulu: uzofunda kuphi
Njengoba kungekho msebenzi wayo eSpain, kufanele uphothule emisebenzini esiyibalule ngenhla. Ngemuva kwalokho, kufanele wenze inkosi yaseyunivesithi ekhethekile kuyo. Ake sibone ukuthi yimaphi ama-degree ehlukene e-master anikezwa eSpain:
Iziqu ze-University master in meteorology and geophysics: Ukwehlukahluka kwe-complutense kweMadrid kuyenziwa futhi inhloso yenkosi ukuqeqesha ongoti kulo mkhakha. Ngenxa yalokhu, ungathuthukisa umsebenzi wakho kumanyuvesi aseSpain noma aphesheya. Unganikezela nasezikhungweni zocwaningo nasezinkampanini.
Iziqu ze-University master in meteorology: Lokhu kwenziwa eNyuvesi yaseBarcelona futhi inhloso yayo enkulu ukuhlinzeka ngoqeqesho oluyisisekelo kwezemeteorology ukuze ikwazi ukuvumelanisa lonke ulwazi kochwepheshe kanye nemihlahlandlela yenhlangano yezomhlaba. Ngalesi sikhulu uzokwazi ukuhlanganisa izifundo ezahlukahlukene ezakha isayensi yasemkhathini njenge: meteorology ebonakalayo, micrometeorology, i-meteorology enamandla, i-physics yamafu, imisebe, ukumodeliswa, ukuhlaziywa nokubikezela futhi, ekugcineni, nesimo sezulu.
Iziqu ze-University master in meteorology and geophysics: kwenzeka eNyuvesi yaseGranada. Vala zonke izici ezibalulekile nezisemqoka ze-geophysics ne-meteorology. Ziyizinkolelo eziningi kodwa nezici zokuhlola ezinamasu anamuhla asetshenziselwa ukuxazulula izinkinga ezahlukahlukene zamanje.
Usebenza kuphi futhi uhola malini?
Ungasebenza ezindaweni ezahlukahlukene ezinjengeziteshi zethelevishini nezomsakazo, ama-ejensi wesimo sezulu, izikhungo zamabhizinisi, izinkampani zomshuwalense, izikhungo zemfundo, kanye nezinkampani ezakha isoftware yesimo sezulu. Inkambu yamasosha nayo ingaba inketho.
Ngokuqondene nomholo, kungahluka kakhulu ngokuya ngensimu okhula kuyo. ESpain, umholo ophakathi nendawo ungasuka kuma-euro ayizi-1.600 aye kuma-2.700 euros ngenyanga. Lokhu kufinyelela kuma-euro ayizigidi ezingama-20.000 32.000-43.000 ngonyaka. Kwamanye amazwe afana ne-United States, isilinganiso somholo singaba ngama- $ XNUMX ngonyaka kukonke.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngokuthi ungaba kanjani yi-meteorologist nokuthi yini okufanele uyifunde.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Ungaba kanjani yisimo sezulu
Yini amandla angaba khona